ယဉ်တကိုယ်မယ်: Chocolate လေးက ပြောတဲ့အသက်
၁။ သင်... တစ်ပါတ်မှာ ချောကလက် ဘယ်နှကြိမ် စားသုံးချင်ပါသလဲ။ (တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဆယ်ကြိမ်ထက် နဲရပါမယ်။)
၂။ ပိုလေးနက်သွားအောင် စားချင်တဲ့အကြိမ်ပေါင်းကို ၂နဲ့မြှောက်လိုက်။
၃။ ၅ထပ်ပေါင်း လိုက်ရအောင်။
၄။ ရလာတဲ့ အဖြေကို ၅၀နဲ့ ထပ်မြှောက်အုံးတဲ့။ (Calculator သွားယူလိုက်ဖို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ မလိုပါဘူး။ ဒါလောက်တော့ Piece of Cake!)
၅။ ဒီနှစ်မှာ မွေးနေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင် ၁၇၅၉ ပေါင်းလိုက်ပါ။ မပြီးသေးရင်တော့ ၁၇၅၈ ပါ။
၆။ ကဲ... သင်မွေးတဲ့ခုနှစ် (အင်္ဂလိပ်နှစ်)ကို နှုတ်လိုက်ပါ။
၇။ သင့်မှာ ဂဏန်းသုံးလုံး ရလာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဂဏန်းကတော့ သင်ချောကလက်စားချင်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်းပေါ့။ ထာထာ ('ချန်ချန်' ကိုရီးယန်းလို) ... နောက်ဂဏန်းနှစ်လုံးကတော့ သင့်ရဲ့ အသက် မှန်လေ။
ဖြူတုတ်တော့ အဖြေမှန်ထွက်တယ်။ ဆိုတော့ စာဖတ်သူရေ... ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ အခုလောက်ဆို အကုန်လုံးက ဒီလှည့်ကွက်ကို သဘောပေါက်ပြီး ပြုံးနေကြလောက်ရောပေါ့။ ဖြူတုတ်ကတော့ နဲနဲနှေး တဲ့သူဆိုတော့ ဒီFormula ကို Develop လုပ်ရာမှာ ဘယ်လို Manipulate လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ အဆင့်၆ ရောက်မှ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒါလေးဟာ Algebra ကို လှည့်ကွက်ကလေးသုံးထားတယ် ဆိုပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Idea ရလာတဲ့သူကို ဖြူတုတ် လေးစားမိတာတော့ ဝန်ခံပါတယ်။ Mathကို စိတ်ဝင်စားသူတို့အတွက် ဖြူတုတ်ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကို ရေးပြမလို့ပါပဲ။ ရေးရမှာနဲနဲရှည်နေတာနဲ့ အပျင်းတို့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်ထက် ဝီရိယကောင်းသူများ ရှိလေမလားလို့ Googleလိုက်ရာမှာ ဒီSITE ကလေးကို တွေ့ပါတယ်။ သူတင်ပြထားပုံက တိကျ သေသပ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် သွားလည်ကြည့်နော်။
ဖြူတုတ်မှာ မေးခွန်းတစ်ခုတော့ ရှိသေးတယ်။ ဒီ Formula ဟာ အသက် ၉၉နှစ်အထိပဲ Valid ဖြစ်တယ်။ အသက်၁၀၀ရှိသူအတွက် မမှန်တော့ဘူး။ လောလောဆယ် ဖြူတုတ်စဉ်းစာမိတာကတော့ ချောကလက်စားကြိမ်ပေါင်းကို ကန့်သတ်ထားလိုများလားမသိ။ သိတဲ့သူရှိရင် ဖြူတုတ်ကိုပြောနော်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီPostကို တင်ထားပြီးသူရှိခဲ့ရင် ဖြူတုတ်ကိုစိတ်မရှိပါနဲ့။ ဒါလေးကို သဘောကျတဲ့အတွက် သိမ်းထားချင်လို့ပါ။ နှစ်ခါထပ်ဖတ်တော့ နှစ်ခါ Fun ပေါ့။ ဟုတ်ဖူးလား?
ပေးပို့သူ: Meyliana Hu
တင်ဆက်သူ ဖြူတုတ်လေး at 9:10 PM
ငံလည်းမငံဘူး တူးလည်းမတူးပါဘူးဟ ညီးချက်တာ ကောင်းပါတယ် ဆက်ချက် ဆက်ချက်
ဟေ.. ဖြူဖြူတုတ်တုတ် လေးရေ..
ပေါင်းနှုတ် မြောက် စား လုပ်လိုက်တာလေ
ငါးရာနှစ်ဆယ့်ရှစ် ရတယ် ဖြူဖြူတုတ်တုတ်ရေ..
ဖြူတုတ်ရေ အမလည်းတွတ်ကြည့် အသက် အမှန်ရတယ် ။ တွတ်ကြည့်ပြီးပြုံးသွားတယ်
မဆုမွန်က ချောကလက် မကြိုက်ဘူး...ချစ်သူပေးရင်တော့စားတယ် ဟိဟိ တပ်ခ် ပို့စ်လေး တင်ပီးပြီနော် ညီမလေး..
Chocolate လေးက ပြောတဲ့ အသက်ကတော့ ကွက်တိပါပဲ..ဟိ..ဟိ.. Calculator တော့ ကူလိုက်ရတယ်... တစ်ခုချင်း အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားလို့ လုပ်လိုက်တာ ပြီးတော့မှ သတိထားမိတော့တယ်....
ချောကလက် မကြိုက်လို့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်မှကို မစားချင်ပါဘူး။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဟင် :P
ချောကလက်ဆို အရမ်းကြိုက်။ များများကြိုက်ရင် များများအသက်ကြီးမှာပေါ့။ ဟုတ်သေးပါဘူး။ ကြိုက်တာ နဲနဲလျော့လိုက်ဦးမယ်။ အသက် ပိုငယ်သွားအောင်။
း) ကျနော်ကတော့ calculator လေးနဲ့ တွက်တာ ကွက်တိပဲး) ဒေါ်ဖြူတုတ် တော်၏ ( မြှောက်ပြောတာ ) အဟေးဟေးး
ချောကလက် လုံးဝ မကြိုက်
အသက်ကိုမတွက်၊မွေးနေ့ ကိုမတွက်၊ပြန်ထွက်ရတော့ မဲ့ နေ့ ကိုပဲအမြဲမျှော်မိတယ်။
၁ /၃၆၅ နဲ့ ထဲ့ပေါင်းရမှာလား ။။ ကယ်ပါဦး ဖြူတုတ်လေးရေ ...
chocolate လည်း စားချင်တယ်
piece of cake လည်းစားချင်တယ်...
သင်္ချာတော့ မတွက်ချင်ဘူး... ပျင်းတယ်...
ကိုလူထွေးက အသက် ၁၀၀ ကျော်နေတော့ တွက်ကြည့်လည်း အဖြေမှန်မှမရနိုင်တာနော်...
တွက်ကြည့်တယ်ဗျ. အဖြေမထွက်ဘူးဗျ.။ ကျွန်တော်ရဲ့ ချောကလက် စားတဲ့ရာနှုန်းက 0% ဖြစ်နေပါ။